Ukuzila ngenyanga ka-Ramadhaan kungenye yezinsika ze-Islam. Kuphoqelekile kuma-Muslim awesilisa nawesifazane athombile ukuthi azile ukudla. Ukuzila kwama-Muslim kuhlukile kwezinye izinkolo.
U-Allah Ta'ala wethembise izibusiso ezinkulu kulabo abazilayo, nesijeziso esibuhlungu kulabo abangazili. Ukuzila kunezinto eziningi ezilusizo empilweni, emphefumulweni kanye nasemphakathini. U-Allah wenze ukuzila kwaba yimpoqo ukuze sibe nokholo nokumesaba kweqiniso. Kwi-Islam ukuzila kusho ukugwema ukudla, ukuphuza nanoma yini, ukubhema, kanye nocanci kusukela ekuseni, ngaphambi kwentathakusa kuze kuyoba sekushoneni kwelanga, ngenhloso yokuzilela u-Allah, nokuthola yonke inhlobo yezibusiso u-Allah azibekele lowo ozilayo.
Okunye okumele sikwazi ukuthi, u-Allah unobubele, akabacindezeli abagulayo, abadala noma abasohambeni. Labo abaphoqelekile ukuba bazile ngenyanga ka-Ramadhaan. Kodwa kumele bazile lapho sebengcono noma futhi sebekwazi ukuthi bangazila. Lokhu kuzila kusuke kukhokhwa lezizinsuku ongazizilanga.
Nazi izinto ekumele uzigweme uma uzilile:
Ungabi nenhliziyo encane.
Ungabuki izinto ezingasile.
Ungalaleli inkulumo embi.
Ungakhulumi izindaba zabantu.
Ungadli ukudla okungaqondakali nge-Iftaar.
“Ukuzila kuyihawu elivimbela umlilo wesihogo nesiphephelo esiqinileyo (esiyovikela ikholwa esijezisweni somlilo).”
Sengathi u-Allah angasivikela sonke emlilweni weSihogo. Ameen
Ngemuva kokufunda lokhu, awusophinde ubuke ubhanana ngendlela ejwayelekile.
Ubhanana uqukethe uhlobo oluthathu lukashukela wemvelo- i-sucrose, i-fructose kanye ne-glucose
ehlanganiswe kanye ne fibre. Ubhanana unikana umdlandla omkhulu wamandla ahlala isikhathi.
Ucwaningo lukufakazelile ukuthi ubhanana ommbili nje kuphela unikezana amandla okumelana
nokuzivocavoca okunzima okungathatha imizuzu engama 90. Akumangazi ukuthi yingakho
ubhanana uyisithelo esiphambili kubadlali abaphambili umhlaba wonke. Kepha akusiwona kuphela
amandla ubhanana ongasinceda ngawo ukuba sizigcine sondlekile. Uyasiza futhi ukunqoba noma
ukuvikela izifo kanye nezimo ezinhlobonhlobo, nokuwenza ufanelwe wukubaluleka koufakwa
ezidlweni zethu zansukuzonke.
Ukubhocobala: Ngokophenyo olusanda kwenziwa yinhlangano i MIND kubantu abaphethwe
yisifo sokukhathala kwamathambo, iningi labo lazizwa lingconywana ngemuva kokudla ubhanana.
Lokhu kungenxa yokuthi ubhanana une trytophan, uhlobo lomsoco oluphendulwa wumzimba libe
yi serotonin, lokhu kwaziwa ngokuthi kuyakuhlambulula, kushintshe isimo okuso kanti singathi
kukwenza uzizwe uthakasile.
PMS: Khohlwa ngamaphilisi- idla ubhanana. U vitamin B6 otholakala kuwo ulungisa amazinga
e glucose egazini, nokuyiko okulawula isimo senhliziyo (mood)
Anemia: Yona enama iron amaningi, ubhanana uvuselela ukukhiqizwa kwe hemoglobin egazini
ngaleyondlela-ke usiza kakhulu esimweni se anemia.
I Blood Pressure: Lesisithelo esiyisimangaliso nesitholakala eduze kolwandle sinemangazini
(i potassium) eningi kanti izinga letswayi kuso liphansi kakhulu, nokwenza sikulungele kakhulu
ukulwa ne blood pressure, ngalendlela yokuthi inhlangano yase Melika i US Food and Drug
Administration kungekudala ivumele abasebenza ngobhanana ukuba benze isaziso esisemthethweni
sokuthi lesisithelo sinamandla okunciphisa ubungozi be- blood pressure kanjalo nesifo sohlangothi
Amandla eNgqondo: Bangamakhulu amabili (200) abafundi basesikoleni sase
Twickenham (e Middlesex) abalekelelwa ekubhaleni kwabo ukuhlolwa ngomunye unyaka ngokuba
badle ubhanana ngesidlo sasekuseni, nesangekhefu lokuqala kanye nangekhefu lesibili emizamweni
yokukhuphula amandla ezingqondo zabo. Uphenyo lukhombisa ukuthi lesisithelo esigcwele
i potassium siyakwazi ukulekelela ezifundweni ngokuthi ligcina abafundi bephapheme.
Ukuqunjelwa: Ngenxa yokuba nenxoza (i-fibre) eningi kuwo, ukufaka ubhanana ekudleni
kungalekelela ekubuyiseleni amathumbu ekusebenzeni kwawo okujwayelekile, nokungasiza
ekunqandeni lenkinga ngaphandle kokusebenzisa amakhambi okugijimisa isisu (ama-laxatives).
I Bhabhalazi: Enye yezindlela eziphuthumayo zokulapha ibhabhalazi wukwenza i banana
milkshake, enongwe ngoju lwezinyosi. Ubhanana upholisa isisu, kanti ngosizo loju lwezinyosi,
kwakheka amazinga ashukela wegazi asuke esenciphile, ekubeni ubisi lona luthambisa lubuye
lubuyise amanzi emzimbeni osuke sewomelwe ngamanzi.
Isilungulela: Ubanana unamandla emvelo okulwa nesilungulela emzimbeni, ngakho-ke uma
uhlushwa yisilungulela, zama ukudla ubhanana ukuze uthole usizo lokupholisa.
Ukugula kwasekuseni: Ukubamba umoya ngobhanana phakathi kwezidlo kusiza ekugcineni
amazinga ashukela wegazi ephezulu kubuye kuvimbe i morning sickness.
Ukulunywa ngumiyane: Ngaphambi kokugijimela umuthi wokugcobisa uma ulunywe ngumiyane,
ake uzame ukuhlikihla lapho ulunywe khona ngengaphakathi lekhasi likabhanana. Iningi labantu
bathola ukumangala okukhuulu lapho bethola ukuthi ukuluma nokuvuvukala kuyancipha.
Imizwa: Ubhanana uno vitamin B omningi osiza ukupholisa imizwa.
Umkhulu kanti futhi uyasebenza?: Izifundo esikoleni esikhulu se Psychology esise Austria ziveze
ukuthi ingcindezi emsebenzini iholela ekugimbeni ekudleni okumnandi njengoshokoledi kanjalo
namazambane ashiiswe emafutheni. Uma kubhekwa iziguli eziyizi-5 000 zasezibhedlela, uphenyo
lwathola ukuthi iningi logimbela kwesakhe (obese) lenza imisebenzi enengcindezi enkulu kakhulu. Umbiko uphothula ngokuthi, ukuvika ukuhalela ukudla, kumele silawule amazinga kashukela
wegazi lethu ngokuba sibambe umoya ngokudla okune carbohydrate eningi njalo ngemuva
kwamahora amabili ukuze amazinga agcineke engatatazeli.
Ama Ulcer: Ubhanana usetshenziswa njengesidlo sokunciphisa isisindo ukulwa nezinkinga
ezisemathunjini ngenxa yokuthamba yokwakhiwa kwawo kanye nokushelela kwawo. Uwukuphela
kwesithelo esingaphekiwe esingadliwa ngaphandle kosizi kwabaphethwe yizifo ezingalapheki.
Ubuye uthene amandla ubumuncu okwedlulele ubuye unciphise ukukhawuzela (irritation)
ngokukwenza ulwelwesi olumboza isisu.
Ukulawula ukushisa: Ezinye izizwe eziningi kubhanana zibona isithelo esi- ''cool'' nesikwazi
ukwehlisa izinga lwako kokubili ukushisa komzimba kanye nokomoya komama abakhulelwe.
Isibonelo, e Thailand, abesifazane abakhulelwe badla ubhanana benzela ukuba ingane yakhe
umama izalwe nesimo sokushisa esipholile (cool).
I Seasonal Affective Disorder (SAD): Ubhanana ukwazi ukusiza labo abanesifo i SAD kwazise
uqukethe ama natural mood enhancer tryptophan.
Ukusetshenziswa kukaSikilidi kanye neMboza: Ubhanana uyakwazi nokusiza abantu abazama
ukuyeka ukubhema. Lo B6, B12 obaqukethe, kanjalo ne potassium kanye ne magnessium
okutholakala kuwo ubhanana, kusiza umzimba ukwazi ukululama ekukhahlamezekeni kokudonsa
I Stress: I Potassium iyi- mineral elibalulekile, elilekelela ukukwenza inhliziyo ishaye kahle,
lithumele i- oxygen ebuchosheni libuye lihambise ngokuyikho isimo samanzi omzimba wakho.
Uma siba ne- Stress, izinga lokugayeka kokudla (metabolism)liyanyuka, ngaleyondlela bese
kuncipha amazinga e- Potassium yethu. Lokhu kungabuyiselwa esimeni sako ngosizo lwesidlo
esincane sikabhanana wona ogcwele i- potassium.
Izifo zohlangothi (Strokes): Ngokophenyo lwe The New England Journal of Medicine, ukudla
ubhanana njengendlela yokudla okujwayelekile kunganciphisa ubungozi bokubulawa yisifo
sohlangothi ngama 40%
Izinduna (Warts): Labo abakhonze ukusebenzisa izindlela zendalo bayagomela ukuthi uma ufuna
ukubulala induna, thatha ingxenyana yesikhumba sikabhanana usibeke enduneni, okuphuzi balo
kube ngaphandle. Ngokucophelela bamba lelikhasi likabhanana ngesinamathiseli noma
Ngako-ke ubhanana ngempela uyikhambi lezifo eziningi. Uma ungawuqhathanisa ne apula,
unama protein aphindwe kane, ama carbohydrate aphindwe kabili, i phosphorus ephindwe kathathu
u vitamin A and iron ophindwe kahlanu, bese uba nawo wonke amanye ama vitamin kanye
nama mineral aphindwe kabili. Uphinde unothe kakhulu nge potassium kanti ungokunye kokudla
okungabizi nokutheni okutholakayo. Ngakho-ke mhlawumbe sekuyisikhathi sokuba siguqule
lesisho esijwayelekile ukuze sithi,
'' Ubhanana owodwa ngosuku ugcina udokotela buqamama!''
“A banana a day keeps the doctor away!''
DLULISELA KUBAHLOBO BAKHO
PS: Ubhanana kumele ube yisizathu sokuba izinkawo zihlale zinamile ngaso sonke isikhathi!
Ngizojobelela nalokhu kokugcina; ngabe sifuna indlela esheshayo yokumenyezelisa izicathulo
zethu? Thatha INGAPHAKATHI lekhasi likabhanana, ulihlikihle ngqo esicathulweni.... bese
umenyezelisa ngendwangu eyomile. Isithelo esimangazayo!
Ngu Mufti Zubair Bayat (DB)
Impucuko yasentshonalanga ihleka usulu lapho kuke kwaphathwa amagama afana nesimilo, ukuziphatha kanye nokuhlonipheka. Lamagama athathwa njengokuthi asephelelwe yisikhathi futhi
engasayifanele inqubo yokukhululeka nenkululeko engenazithiyo. Ukungaziphathi, ukuhlobonga,
ukungabi namahloni nokuphinga sekuthathwa njengezinto eziyintuthuko futhi nezisefeshinini. Ekubeni kube kuyikho kanye okuwumsuka wokubhubha kobumbano lomndeni oqinile. Miningi
kakhulu imindeni ebineme kodwa esihlakazekile ngenxa yokungethembeki, nokube sekushiya
uhide losizi, izinhliziyo ezibuhlungu kanye nomphakathi ontengantengayo. Ukuphinga nako kuholela emavezandlebeni abantwana abangafunwa nabaphenduka enkulu inkinga le emphakathini,
ngenxa yokuswela ukukhuliswa ngabazali okuyikho. Ngempela ukonakala kuyisiqalekiso soluntu kanjalo nomphakathi.
Lelozwe elizigqaja ngokuba yisikhondlakhondla somhlaba sanamuhla, nokuba ngungqa phambili
empucukweni yanamuhla, i United States of America isanganiswe ngamandla okungaziphathi.
Eminyakeni engemingaki edlulile, u Bill Clinton wabiza imbizo yabaholi bezwe lonke ukuba
kuzodingidwa inkinga yentsha engama 15 million esengcupheni eMelika. Namhlanje yonke enye
ingane yaseMelika iyivezandlebe (izalelwe ngaphandle komshado). Manje ama 38% ezingane
ahlala ngaphandle kukababa oyizalayo; kuthi eziyigidi ezingu 6.6 zona zihlala nabazali asebehlukanisile nabahlala ngabodwana, iningi labo okungomama abayeni asebahlukana nabo,
nabavele banyamalale kuhle okomoya ezinganeni zabo. Lena yimpilo yomndeni e Melika. ''Kukhona okungalungile ngayo yonke impilo yomndeni yase Melika,'' kubhala u Martin Marty,
inzululwazi e University of Chicago ephepheni i Los Angeles Times. '' Kunomuzwa oxakayo
umuntu anawo wokuthi i Melika yizwe elinezingane eziningi kodwa abantu abadala ababonwa.''
Lomfanekiso osabekayo uwumphumela wokusweleka kobuqotho, ukuhlonipheka, kanye
nokuzithoba e Melika kanye nakuwo wonkana umhlaba wase Ntshonalanga.
Indlela eyodwa qhwaba nokuyiyona kuphela engabuyisela emuva loku konakala ibuyisele nesizotha
eluntwini, wukubuyela endleleni yobuqotho kanye nokuhlonipha. Kungenxa yalesisizathu-ke iIslam
iye yabeka isigcizelelo esikhulu odabeni lokuhlonipha. Phakathi kwezimfundiso eziphakeme, i Islam ikhuthaza ngamandla amakhulu umqondo wobuqotho. Ubumsulwa kobuqotho kwamukelwa njengensika yomphakathi owakhiwe wumndeni ohlanzekile. Noma ngabe yini eswabisa ngokubhubhisa umongo wobuqotho bomphakathi kanye nempilo yomndeni kuthathwa njengecala
elibi kabi kwi Islam. Isibonelo, ukuphinga, noma ngabe kwenziwe ngongakashadi noma oseshadile, kuyisenzo esilimaza impilo yomndeni eqinile. Akekho umfazi othanda ukuba umyeni wakhe abe
nomakhwapheni kanjalo nomyeni. Ngaleyondlela i Islam iye yamemezela ukuphinga njengento
engavumelekile. Ukuphinga kuthathwa njengecala elibi kakhulu; umphingi uqalekiswe kakhulu.
Ezweni elibuswa ngomthetho we Islam, lelicala lithwele isijeziso esikhulu kunazo zonke ngaphansi
ukuphehla ukukhanuka, noma ekugcineni engaholela ekulingekeni kanye nesono sokuphinga, nayo
iqalekisiwe kwabuye kwanqunywa ukuthi ayivumelekile kwi Islam. Ngalendlela, umnyango oya
ebubini nasekonakaleni uvaleke ngempela. Kufana nesimo sokuqhelisa utshani obomile bokufulela
kude nekloba lomlilo, kunokuzama ukulawula ikloba lomlilo ngethemba lokuthi utshani ngeke
buhangulwe wumlilo. Lesisifanekiso sishwankathela inqubo ye Islam kanye nendlela ubuqotho obuthathwa ngayo uma kuqhathaniswa naleyo yase Ntshonalanga. Eminye yemithetho eyamukelwe
yi Islam ukuvikela nokuqhakambisa ubuqotho, wukuvinjwa kwehlo lokukhanuka phakathi kwabesilisa nabesifazane.
Omunye umthetho.yilowo ogcizelela ukumboza lezozindawo zomzimba ezikhuthaza imizwa yokukhanuka kanye nomunyu. Konke lokhu kuqoqelwe endleleni yokugqoka kwe Islam. Owesimame, nogcwele ithonya kanye nobuhle bendalo, uyalelwe ukuba amboze zonke lezizizitho
zomzimba wakhe. Nabesilisa nabo kuyadingeka ukuba bamboze ezinye zezitho zemizimba yabo. Ezithweni abesimame bama Muslim okumele bazimboze yizinwele zabo, imilenze, izingalo- kanye
nobuso, uma besezindaweni zomphakathi.Ubuso bowesimame yisona senza samuntu sobuhle bakhe
kanye nesidonsamehlo esikhulu somzimba wakhe. Lokhu kumboza akugcini ngokukhubaza
unkunakwa kwakhe okungadingekile, kodwa kubuye kumnikeze izinga elithile lokuhlonipheka,
udumo kanye nesithunzi nokuthi abe nokuziphathela yena umzimba wakhe abuye ezwe umuzwa wokuba namandla phezu komzimba wakhe, konke abalingani bakhe abahlale bebukisa ngemizimba
yabo abemukiwe kona.
Isizotha ekugqokeni sithathwa njengesimo esifanayo kwabesimame bama Khrestu, bama Juda, bama Hindu kanjalo nabama Muslim basemandulo. Izithombe zabafazi bama Bhunu ukwenza
isibonelo, zikhombisa ngokucace bha isizotha ekugqokeni kwabo. Izingubo zabo ezinde ezivulekile,
kanye nemihele yabo eyayifihla izinelwe zabo kanye nengxenye yobuso babo, kufakazela leliphuzu.
Sekungenxa yezimfundiso zokona zesimanje manje eseziholele abafazi baseNtshona sebezithola
belahlekelwe isizotha sabo semvelo, kwaze kwafika isigaba ngesigaba, lapho ukugqoka izigqebhezana ezincane noma ukuzishayela ngesudi yesele sekuthathwa njengento esefeshinini kwabesifazane. Kwathi ukugqoka izevatho kwaphenduka umkhuba wakudala nosuphelelwe yisikhathi. Laba abesimame abalusizi baseNtshonalanga kunokwenzeka bangakuphimisi ngemilomo yabo, kodwa bafela ngaphakathi okwebutho likaZulu mayelana nesizotha kanye nokuhlonipheka kwabesimame sama Muslim. Uma-nje abafazi bama Muslim bengakuthokozela
lokhu babuye babambelele baqinise ezindleleni zabo eziyigugu okwegolide! Insha Allah